यी स्वादिष्ट ग्रीष्म Treतु वेकफिल्डसँग शान्त रहनुहोस् - उत्पादनहरू
यी स्वादिष्ट ग्रीष्म Treतु वेकफिल्डसँग शान्त रहनुहोस्
Weikfields Foods सम्पूर्ण परिवार को लागी एक रमणीय गर्मी उपचार को प्रतिज्ञा गर्दछ।
तातो छ र गर्मीलाई हराउनको एक निश्चित तरिकत यो भलाईको एक स्वादिष्ट कचौरा हो। चिसो, एकदम मीठो र स्फूर्तिदायी! र त्यसबाट हाम्रो मतलब जेली र कस्टर्डको कचौरा वीकफिल्डको हो। के तपाईंलाई थाहा छ, यो राम्ररी मन पराउने लेबललाई लोकप्रिय रूपमा 'कस्टर्ड कम्पनी' भनेर चिनिन्छ? र ठीक नै, वीकफिल्ड फूड्स भारतमा दशकौंदेखि कस्टर्ड र अन्य मिठाई मिक्सहरू बेच्दै आएको छ। र १ 195 66 मा मिति लिन सकिन्छ, जब कम्पनीले लगातार लाखौं उपभोक्ताहरूलाई विश्वव्यापी व्यंजनहरू ल्याएको छ।
हाम्रो लागि बाहिर के विविधता उपलब्ध छ। हो, वेकफिल्ड फूडहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मिठाई मिक्सहरूको विस्तृत श्रृंखला छ, क्रीमी कस्टर्ड मिक्सबाट five पाँच रोमाञ्चक स्वादहरूमा उपलब्ध छनौटात्मक पुडिंग मिक्सहरू र जेली क्रिस्टलहरू जुन रेफ्रिजरेसन बिना सेट गरिएको छ। हामी उनीहरूको सर्वश्रेष्ठ बिक्रेतालाई सिफारिश गर्दछौं, वेकफिल्ड केसर पिस्ता फालुदा दायरा जसमा गुलाब, स्ट्रबेरी, आम, र केसार पिस्टा जस्ता नवीन स्वादहरू समावेश छन्। सम्पूर्ण परिवारका लागि एक महान गर्मी उपचार, सही ?!
के यस ब्रान्डको बारेमा विशेष कुरा के हो भने भीड मनपर्ने छन् कि अग्रणी अभिनव स्वादहरु लाई ल्याउन को लागी समर्पण। ग्रीष्म steadतु हाम्रो ढोकाको मोर्चमा निरन्तर चलिरहेको छ, यो एक भोग हो जुन बच्चाहरूदेखि युवा किशोर, आमा बुबा, र वरिष्ठहरू सबै उमेर समूहहरूको लागि उपयुक्त छ ... हामी वेकफिल्ड फूडहरू मन पराउँछौं।
र यहाँ एक स्वादिष्ट जेली र कस्टर्ड डिश र एक भीड-खुसीकर्ता, केसर पिस्टा फालुदाका लागि नुसार हो।
जेली कस्टर्ड बालुवाका शटहरू
जेली बेस को लागी
Weikfield जेली क्रिस्टल
पानी cup कप
वीकफिल्ड कस्टर्ड पाउडर
दुध ½ लिटर
चिनी t चम्मच
पाचन बिस्कुट -10-१०
- एक कचौरामा वेइकफिल्ड जेली क्रिस्टल प्याक र प्रीमिक्स स्याचेटको सामग्रीहरू मिक्स गर्नुहोस्।
(उपेक्षा गर्नुहोस् यदि कुनै ढेलाहरू फेला पर्‍यो भने जुन अर्को चरणहरूमा विघटन हुन्छ)
- छुट्टै कचौरामा, cup कप पानी उमाल्नुहोस्। एक मिनेट को लागी यसलाई चिसो।
- मिश्रण भएको कचौरामा उमालेको पानी हाल्नुहोस्। पूर्ण रूपमा विघटन नभएसम्म चलाउनुहोस्।
तलबाट १ इन्च सम्म कांचमा मिश्रण राख्नुहोस्।
- जेली कोठाको तापक्रममा सेट हुनेछ। उत्तम परिणामको लागि यसलाई 30० मिनेटको लागि फ्रिजमा राख्नुहोस्।
- २ चम्मच कस्टर्ड पाउडर २ कप कप दूधमा ½ लिटिएको दुधबाट लिनुहोस्।
- एक टाँस्न राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्।
- बाँकी दुधमा t चम्मच चिनी र उमालेर राख्नुहोस्।
- उमालेको दूधमा बिस्तारै टाँस्नुहोस्, लगातार हलचल गर्नुहोस् र २ मिनेटसम्म पकाउनुहोस्। यसलाई चिसो हुन दिनुहोस्।
बिस्कुट बालुवा -
- पाचन बिस्कुटलाई बालुवा जस्तो बनावटको लागि मिक्सरमा क्रुश गर्नुहोस्।
- गिलासमा जेली लेयरको माथि पातलो कुचिएको बिस्कुटको एक लेयर थप्नुहोस्।
- Weikfield कस्टर्डको उदार तहको साथ शीर्ष।
- बिस्कुट तह र फेरि कस्टर्डको अर्को लेयर दोहोर्याउनुहोस्।
- शीर्षमा अन्तिम बिस्कुट तह थप्नुहोस्। Fondant वर्णहरु, स्प्रिंकहरु र ककटेल छाता संग सजावट।
केसर पिस्ता फालुदा
• Weikfields Kesar Pista Falooda १०० gms
• दूध m०० मिलि
• पानी १०० मिलि
• Chia बीज2tsps भिगोयो
Van १ भेनिला आइसक्रीमको स्कूप
T १ चम्मच काटिएको पिस्ता
• cas काजू काटियो
- सॉस प्यानमा दूध, पानीमा खन्याउनुहोस् र यसलाई फोकामा आउन दिनुहोस्।
- Weikfields Kesar Pista फालूदा जोड्नुहोस् एक पटक यो फोकामा आउँदछ र ज्वालालाई हल्का उकालोमा घटाउनुहोस्। तरल पदार्थलाई नहेर्नुहोस् जब सम्म यो राम्रोसँग सम्मिलित हुँदैन।
- minutes मिनेट पछि जब तरल अलि गाढा हुन्छ, ज्वाला बन्द गर्नुहोस् र छेउमा राख्नुहोस्।
- तपाईको सेवा गिलासको तल चिया बीजमा खन्याउनुहोस्।
- तपाईको वेकफिल्ड्स केसर पिस्ता फालुदा तरललाई गिलासमा राख्नुहोस् र पूर्ण रूपमा चिसो नभएसम्म अलग राख्नुहोस्।
- शीर्षमा आइसक्रीमको स्कूप राख्नुहोस्।
- पिस्ता र काजूसँग गार्निश गर्नुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस्: गर्मी मनाउन फेड २०२१ को साथ मनाउनुहोस्: दिन २ अब लाइभ छ!
कपाल झर्नेको लागि प्राकृतिक घरेलु उपचार
केटिहरुका लागि कपाल कटाई शैली
एन्टि कपाल झर्ने घरेलु उपचार
घर मा पेट कम गर्न सरल व्यायाम
कपाल झर्नु रोक्नको लागि सल्लाहहरू